Metering na agwakọta pasty ma ọ bụ ngwaahịa viscous nke nwere 2 dị elu
by Delta Injinịa / Tọzdee, 20 Jenụwarị 2015 / bipụtara Sistemụ 2-akụrụngwa
Ejiri DMC022 maka metering na agwakọta pasty ma ọ bụ ngwaahịa viscous dị elu viscous 2. Igwe dị mma maka dosing, extrusion na ngwa nke ngwaahịa gị na obere nsogbu. A pụkwara ịhazi ngwaahịa thixotropic na DMC022.
Ohere dị otu a maka nrụnye DMC202, naanị ọdịiche dị n'etiti nrụnye abụọ bụ ntinye ngwaahịa. N'ebe a, a na-enyefe nrụgide dị mkpa iji na-eri nri dị iche iche n'ime nfuli site na nkeji ebule. Enwere ike ịhazi paịlị 20 L na 200 L.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara aka ọrụ, lelee pdf-folda.